Kayah State Supreme Court - တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားစီရင်ရေးသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသုံးဖြာအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဥပဒေပြုရေးအာဏာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတို့မှ သီးခြားရပ်တည်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တရားလွှတ်တော်များနှင့် အဆင့်ဆင့်သောတရားရုံးများသို့ ခွဲဝေအပ်နှင်းထားပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေတို့အရ အောက်ဖော်ပြပါတရားရုံးများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ် လ ၃၀ ရက်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
( က ) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
( ခ ) တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
( ဂ ) ခရိုင်တရားရုံး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတရားရုံးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတရားရုံး
( ဃ ) မြို့နယ်တရားရုံး
( င ) ဥပဒေအရ တည်ထောင်သည့် အခြားတရားရုံးများ
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ် လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်တွင် တိုင်းဒေသကြီး ( သို့မဟုတ် ) ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းတရားရုံးများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတရားရုံးများ၊ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ်တရား ရုံးများ နှင့် ဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော အခြားတရားရုံးများကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကယား ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကိုလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၅၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ တို့အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သည် ကယားပြည်နယ်၏မြို့တော်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကယားပြည်နယ်တရားရုံးအဆောက်အဦကို ( ၁၅-၁၀-၂၀၀၁ ) ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယင်းအဆောက်အဦ၌ပင် ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို ( ၃၀-၃-၂၀၁၁ ) ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်ဖွင့်လှစ် ရုံးထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦ အရှေ့ဘက်တွင် သမိန်ထောလမ်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ကယားပြည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ တောင်ဘက်တွင် လွိုင်ကော် - ရှားတောလမ်းနှင့် မြောက်ဘက်တွင် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသွားလမ်းတို့ ရှိပါသည်။
ကယားပြည်နယ်အတွင်းတွင် ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ခရိုင်တရားရုံး ( ၂ ) ရုံး၊ မြို့နယ်တရားရုံး ( ၇ ) ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လွိုင်ကော်ခရိုင်တရားရုံး လက်အောက်တွင် လွိုင်ကော်၊ ဒီးမော့ဆို၊ ဖရူဆို၊ ရှားတော မြို့နယ်တရားရုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဘောလခဲခရိုင်တရားရုံးလက်အောက်တွင် ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စဲ့မြို့နယ်တရားရုံးများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။
ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးတင်ဝင်းသည် ( ၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ထိ)လည်းကောင်း၊ တရားသူကြီးချုပ် ဦးကျော်လင်းမောင်သည် ( ၂၉-၂-၂၀၁၂ မှ ယနေ့ထိ)လည်းကောင်း၊ တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်သန်းသန်းအေးသည် ( ၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ယနေ့ထိ ) လည်းကောင်း၊ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးဦးတင်ဌေးသည်( ၂၉-၂-၂၀၁၂မှ၁၈-၉-၂၀၁၇ ထိ)လည်းကောင်း၊ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်စဝ်ဥမ္မာကြည်သည် ( ၅-၁၂-၂၀၁၇ မှ ယနေ့ထိ ) လည်းကောင်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား
ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်မှ လွိုင်ကော်အကျဉ်းထောင် အားကြည့်ရှုစစ်ဆေး
( ၁၉ ) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်း
Copyright © 2019 High Court of Kayah State. All Rights Reserved.
Email : kayah.hc@mptmail.net.mm